ဆိုးလ်မြို့က ကျောင်းတွေမှာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအကြောင်း သင်ပေးတော့မယ့် တောင်ကိုရီးယား – Moe Tauk Pan
အခု အခှငျ့ အလမျးပညာရေးကို ပုံမှနျသငျရိုးညှနျးတမျးတှမှောမဖျောပွထားပမေယျ့လညျး လူမှုရေးပွဿနာတှကေိုသငျကွားပေးမယျ့ လှုပျရှားမှုမြိုးပါ။မွနျမာနိုငျငံအကွောငျး သငျကွား ပေး မယျ့ခေါငျးစဉျ ၅ခုရှိမှာပါ-
၁.မွနျမာ နှငျ့ ကြှနျုပျ၏ ဆကျသှယျမှု၊ ၂.မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ရဲရငျ့သောနိုငျငံသားမြား၃.နစေ့ဉျဘဝမှာ ငွိမျးခမျြးရေးကိုထိနျးသိမျးခွငျး၊ ၄. မွနျမာနိုငျငံမှငွိမျးခမျြးရေး၊ ၅. မွနျမာ-ကိုရီးယား
သှေးစညျးညီညှတျမှုဖလှယျခွငျးဆိုတဲ့အကွောငျးအရာတှပေါဝငျမှာပါ တောငျကိုရီးယားကြောငျးသားတှကေိုမွနျမာ့နှဦေးတျောလှနျရေးအကွောငျးသငျကွားပေးရတဲရညျရှယျခကျြကအခုအခှငျ့အလမျးပညာရေးကတဆငျ့ ကြောငျးသားလေးတှေ ရငျ့ကကျြတဲ့နိုငျငံသားတှေ ဖွဈ လာစဖေို့ပါ
ဒါ့အပွငျကြှနျုပျတို့အိမျနီးခငျြးနိုငျငံတှရေဲ့ငွိမျးခမျြးရေးကိုထိနျးသိမျးခွငျးကကြှနျုပျတို့ရဲ့ငွိမျးခမျြးရေးကိုကာကှယျစောငျ့ရှောကျခွငျးဆိုတဲ့အသိပညာကိုရရှိစခေငျြလို့ပါတဲ့။ကြေးဇူးပါယောက်ခမမွရေေ။မူရငျးပို့ဈပိုငျရှငျအား လေးစားစှာဖွငျ့ ခရကျဒဈပေးပါတယျ
အခု အခွင့် အလမ်းပညာရေးကို ပုံမှန်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေမှာမဖော်ပြထားပေမယ့်လည်း လူမှုရေးပြဿနာတွေကိုသင်ကြားပေးမယ့် လှုပ်ရှားမှုမျိုးပါ။မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း သင်ကြား ပေး မယ့်ခေါင်းစဉ် ၅ခုရှိမှာပါ-
၁.မြန်မာ နှင့် ကျွန်ုပ်၏ ဆက်သွယ်မှု၊ ၂.မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရဲရင့်သောနိုင်ငံသားများ၃.နေ့စဉ်ဘဝမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ၄. မြန်မာနိုင်ငံမှငြိမ်းချမ်းရေး၊ ၅. မြန်မာ-ကိုရီးယား
သွေးစည်းညီညွတ်မှုဖလှယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်မှာပါ။တောင်ကိုရီးယားကျောင်းသားတွေကိုမြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအကြောင်းသင်ကြားပေးရတဲရည်ရွယ်ချက်ကအခုအခွင့်အလမ်းပညာရေးကတဆင့် ကျောင်းသားလေးတွေ ရင့်ကျက်တဲ့နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ် လာစေဖို့ပါ။
ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းခြင်းကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတဲ့အသိပညာကိုရရှိစေချင်လို့ပါတဲ့။ကျေးဇူးပါယောက္ခမမြေရေ။မူရင်းပို့စ်ပိုင်ရှင်အား လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်ပေးပါတယ်
နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသားတွေကို ဘီအီးဒီဘွဲ့ပေးပြီး CDM ဆရာ၊ ဆရာမ နေရာတွေကို အစားထိုးဖို့ စစ်ကောင်စီပြင်ဆင်